पाँच वर्षमा १२ करोडको काम हुने | गृहपृष्ठ
Home विकास पाँच वर्षमा १२ करोडको काम हुने
विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिल्प) अन्तर्गत आगामी ५ वर्षमा रू. १२ करोडको काम हुने भएको छ । यो अवधिमा सडक स्तरोन्नतिको काम गर्न ढुङ्गागाढे–बुङकोट–मनकामना सडकखण्डको ढुङ्गागाढे–घैरुङखण्ड आयोजनाले चयन गरेको छ । यसअघि चयन गरेको नारेश्वर–निमेल–ताकुखण्डको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले ढुङ्गागाढे–घैरुङखण्ड चयन गरेको बताइएको छ ।
आवश्यकता सबैतिर उत्ति नै भए पनि कम लागतमा धेरै काम हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता ढुङ्गागाढे–घैरुङतिर दिए पनि अहिले ढुङ्गागाढेदेखि बुङकोटको चौकी डाँडासम्मको खण्ड सडक योजना कार्यालयले स्तरोन्नति गर्ने भएकाले सोबापत बचेको रकम प्राविधिक कुरा मिलाएर नारेश्वर–निमेल खण्डमा उपयोग गर्ने डीआरसीसीले निर्णयसमेत गरेको छ । यस अवधिमा काम इष्टिमेशनअनुसार राम्रो भएमा रकम थप हुने प्रावधान छ । ड्रिल्पको गोरखामा सञ्चालन भएको पहिलो चरणको कार्यक्रममा रू. २० करोड खर्च हुनुपर्नेमा रू. १४ करोड मात्र खर्च भई निर्माण भएको कामसमेत राम्रो हुन सकेको थिएन ।
ड्रिल्पले सडक निर्माणका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसअघि गोरखा आरुघाट सडक ग्राभेलको काम गरेको थियो । यसबाट हजारौं गोरखावासी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । योजना सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग चाहिने गोरखास्थित ड्रिल्प कार्यालयले बताएको छ । गोरखा मनकामना सडकखण्ड ग्राभेल हुँदा मनकामनाबाट गोरखा आउने–जाने पर्यटक तथा भक्तजनका लागि सजिलो पर्छ ।